सस्तो ट्रेनिटालिया ट्रेन टिकटहरू र यात्रा मूल्यहरू | एक ट्रेन सेव
सस्तो ट्रेनिटालिया ट्रेन टिकटहरू र यात्रा मूल्यहरू
घर > सस्तो ट्रेनिटालिया ट्रेन टिकटहरू र यात्रा मूल्यहरू
यहाँ तपाईं बारे मा सबै जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ सस्तो Trenitalia ट्रेन टिकट र Trenitalia यात्रा मूल्यहरु र लाभहरू.
शीर्षकहरू: 1. ट्रेन हाइलाइटहरू द्वारा Trenitalia
2. Trenitalia को बारे मा 3. शीर्ष इनसाइट्स सस्तो ट्रिनेतालिया ट्रेन टिकट प्राप्त गर्न
4. Trenitalia टिकट कति खर्च हुन्छ 5. यात्रा मार्गहरू: Trenitalia लिन किन यो राम्रो छ, र हवाइजहाजबाट यात्रा गर्नुहुन्न
6. मानक अर्थव्यवस्था बीच के भिन्नताहरू छन्, प्रिमियम, Trenitalia मा व्यापार र कार्यकारी 7. त्यहाँ एक Trenitalia सदस्यता छ
8. Trenitalia को प्रस्थान पहिले आउन कसरी लामो 9. Trenitalia ट्रेन कार्यक्रम के हो?
10. कुन स्टेशनहरू Trenitalia द्वारा सेवा गरीन्छ 11. Trenitalia FAQ
ट्रेन हाइलाइटहरू द्वारा Trenitalia
Trenitalia कम्पनी १ जून को शुरूआत भएको थियो 2000.
मा 2005, को Frecciarossa 1000, ट्रिनेटालियाको सब भन्दा द्रुत ट्रेन लाइन सुरू भयो. फ्रिक्सीआरोसा 1000 प्रति घण्टा 300km को हुन्छ.
प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय रेल मार्ग जेनेभा र मिलानको बीच हो र यसले लिन्छ4Trenitalia मा बोर्ड मा घण्टा.
ट्रिनेतालियाले लामो दूरीको रेल सेवाहरू र जडानहरू र इटालीको कुनै पनि ठाउँमा क्षेत्रीय ट्रेनहरू सञ्चालन गर्दछ.
Trenitalia को बारे मा
ट्रिनेतालिया उच्च-गति रेल एक सेवा हो जुन उत्तरबाट दक्षिण र पूर्व देखि पश्चिममा इटाली र इटाली स्विट्जरल्याण्डसँग जोडिन्छ, फ्रान्स, अस्ट्रिया, र जर्मनी.
को trenitalia ट्रेनहरु उच्च गति रेल लाइनहरूमा एक घण्टा सम्म 3oo किमी मा यात्रा गर्दै छन्.
केवल मा3घण्टा तपाई मिलनबाट रोम जान सक्नुहुनेछ र मिलानबाट बोलोना सम्म 1 घण्टा.
जाऊ त्यहाँ एउटा ट्रेन होमपेज बचत गर्नुहोस् वा खोजी गर्न यो विजेट प्रयोग गर्नुहोस् Trenitalia को लागी टिकटहरु
शीर्ष इनसाइट्स सस्तो ट्रिनेतालिया ट्रेन टिकट प्राप्त गर्न
नम्बर 1: तपाईको ट्रेनेतालिया टिकट अग्रिममा बुक गर्नुहोस् जति सक्दो गर्न सक्नुहुन्छ
Trenitalia टिकट बीचमा उपलब्ध छन्2गर्न4प्रस्थान मिति भन्दा महिना अगाडि. अग्रिममा ट्रेनिटलिया टिकट बुकिंग गर्नाले तपाईले सस्तो टिकट पाउनुहुनेछ जुन धेरै सीमित छ. ट्रेनको टिकट मूल्यमा बढ्दै जाँदा तपाईं यात्राको दिनको नजिक जानुहुन्छ, त्यसो गर्न तपाईंको रेल टिकट खरीदमा पैसा बचत गर्नुहोस्, सकेसम्म अग्रिम क्रम गर्नुहोस्.
नम्बर 2: अफ-पीक पीरियड्समा ट्रेनितालिया द्वारा यात्रा
Trenitalia टिकट अफ-पीक घण्टाको बखत सस्ता हुन्छ, हप्ताको सुरूमा, र दिन र मध्य हप्ताको ट्रेन यात्राहरूमा (मंगलबार, बुधवार, र बिहीबार) प्राय सस्तो मूल्यहरु. सबै भन्दा राम्रो मूल्य को लागी, हप्ताको बिहानी र बिहान साँझ Trenitalia रेल नलगाउनुहोस् (धेरै व्यवसाय यात्रीहरूको कारण). शुक्रबार र आइतबार साँझ Trenitalia ट्रेनहरु लिन सम्भव भए बेवास्ता गर्नुहोस् (सप्ताहन्त getaways को लागी अनुकूल) र समयमा सार्वजनिक बिदा र स्कूल छुट्टीको समयमा पनि किनभने यी अवसरहरूमा Trenitalia टिकटको स्काईरोकेटको मूल्यहरू.
नम्बर 3: Trenitalia को लागी तपाईंको टिकटहरू अर्डर गर्नुहोस् जब तपाईं आफ्नो यात्राको तालिकाको निश्चित हुनुहुन्छ
Trenitalia ट्रेन सेवा उच्च मांग मा छ. ट्रिनेतालिया बेस रेल टिकट सीमा विनिमय गर्न र परिवर्तन गर्न सकिन्छ र अर्थव्यवस्था मानक टिकट ट्रेन प्रस्थान मिति भन्दा पहिले मात्र एक पटक परिमार्जन गर्न सकिन्छ।. तपाईं अन्य ट्रिनेतालिया टिकटहरू साटासाट वा फिर्ता गर्न सक्नुहुन्न, तर त्यहाँ इन्टरनेट मा फोरमहरू छन् कि तपाईं आफ्नो Trenitalia टिकट दोस्रो हात बेच्न सक्नुहुन्छ. यसका लागि ट्रेन सिफारिश बचत गर्नुहोस् Trenitalia यात्रा बुक गर्न को लागी हो जब तपाईं आफ्नो यात्रा तालिका को लागी निश्चित हुनुहुन्छ.
नम्बर 4: एक ट्रेन बचाउनुहोस् मा आफ्नो Trenitalia टिकट खरीद गर्नुहोस्
सेभ ए ट्रेनसँग युरोप र विश्वव्यापी रूपमा रेल टिकटको सबैभन्दा बढी प्रस्ताव छ, हामी सस्तो ट्रिनेटालिया टिकटहरू भेट्छौं. हामी धेरै रेल अपरेटरहरूसँग जडित छौं र हाम्रो टेक्नोलोजी एल्गोरिदमले तपाईंलाई इटालीमा सस्तो सस्तो Trenitalia टिकट दिन्छ अन्य ट्रेन अपरेटरहरूको संयोजनको साथ अन्य गन्तव्यहरूमा।. हामी ट्रेनिटालिया ट्रेनहरूको विकल्प पनि फेला पार्न सक्छौं.
Trenitalia टिकट कति खर्च हुन्छ?
उदाहरण को लागी Trenitalia टिकट मूल्यहरु पदोन्नति समयमा € २१ मा सुरु हुन सक्छ तर अन्तिम मिनेटमा € reach reach मा पुग्न सक्छ. Trenitalia टिकट मूल्यहरु तपाईले छनौट गर्नुभएको वर्गमा निर्भर रहनुहोस् र यहाँ रोम - नेपल्सको लागि प्रति वर्ग औसत मूल्यको सारांश तालिका छ / रोम – मिलान / मिलान – फ्लोरेन्स ट्रेन यात्रा:
प्रिमियम 42 € – 90 € 78 € – 172 €
यात्रा मार्गहरू: Trenitalia लिन किन यो राम्रो छ, र हवाइजहाजबाट यात्रा गर्नुहुन्न?
1) ट्रिनेटालिया ट्रेनहरूको फाइदा यस तथ्यबाट सुरू हुन्छ कि तपाईं प्रस्थान गर्न सक्नुहुन्छ र सिधै शहरको केन्द्रमा तपाईं पुग्न सक्नुहुने शहरहरू मध्ये कुनैमा पनि आउन सक्नुहुन्छ।. पक्कै पनि, यो त्यस्तो चीज हो जुन ट्रेनहरूको लागि धेरै अनौंठो हुन्छ, विशेष गरी यदि तपाईं रोम बाट यात्रा ट्रेन, मिलान, फ्लोरेन्स, जेनेभा, वा मोनाको, यो Trenitalia को लागी एक प्रमुख लाभ हो. यात्रा शहरको केन्द्रको लागि सिधा छ भन्ने तथ्यका कारण, तपाईं ट्राफिक जामलाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ र छुट्टीमा ट्राफिकमा फस्नु भन्दा खराब कुनै छैन.
जब यो Trenitalia ट्रेन टिकट को लागी आउँछ मूल्य निर्धारण, मूल्यहरू प्रायः भिन्न हुन्छन्. केहि प्रचारले तपाईंलाई सस्तो ट्रेन टिकटहरू लिन अनुमति दिँदछ, तर प्रस्थान अघि अन्तिम दिनहरूमा, मूल्यहरु बढ्दो भैरहेछ यदि तपाईं राम्रो यात्रा को लागी, Trenitalia तपाईको लागि हो!
2) हवाइजहाजबाट यात्रा गर्न एयरपोर्ट सुरक्षा प्रक्रियाहरू छन्. यसको मतलब तपाई कम्तिमा हुनु पर्छ2तपाईंको निर्धारित प्रस्थान अघि घण्टा. Trenitalia संग, तपाईं भर्खर आउन आवश्यक छ 30 मिनेट अग्रिम. पनि, तपाईंले शहरको केन्द्रबाट एयरपोर्ट सम्म यात्रा गर्नुपर्नेछ. त्यसैले, यदि तपाईंले सम्पूर्ण यात्रा समय गणना गर्नुभयो भने, Trenitalia जहिले कुल यात्रा समय मा जीत र मूल्यमा पनि यदि तपाइँ पैसाको रूपमा तपाइँको समय गणना गर्नुहोस्.
3) कहिलेकाँही Trenitalia टिकट मूल्य टिकट अनुहार मानमा हवाइजहाज भन्दा बढी हुन्छ, तर तुलनामा एयरपोर्टमा यातायातका कुनै साधनहरू लिनको लागि कति लागत लाग्छ समावेश गर्दछ. यसबाहेक, केही अवस्थामा, तपाईं पनि खाली समय प्राप्त जब Trenitalia ट्रेनहरु द्वारा यात्रा र अन्तमा Trenitalia संग, तपाईंसँग सूटकेस शुल्क छैन.
4) अन्ततः, हवाइजहाजहरू हावा प्रदूषणको एक कारण हो, तुलना स्तरमा, Trenitalia ट्रेनहरु छन् धेरै बढी वातावरण मैत्री, र यदि तपाईं एक रेल यात्रा एक हवाईजहाज तुलना, ट्रेन यात्रा हवाई जहाज भन्दा २० गुणा कम कार्बन प्रदूषक हो.
मानक अर्थव्यवस्था बीच के भिन्नताहरू छन्, प्रिमियम, व्यापार, र Trenitalia मा कार्यकारी?
Trenitalia धेरै ट्रेन टिकट वर्ग सेवाहरू प्रदान गर्दछ जुन कुनै पनि बजेट र यात्रुको प्रकारको लागि निर्मित हुन्छ, चाहे तपाइँ एक व्यापार यात्री हो, फुर्सत, वा दुबै.
Trenitalia ट्रेन टिकट वर्ग बीचको मुख्य भिन्नता टिकट परिमार्जनको अप्ठ्यारोपन हो, मूल्यहरु, र सेवाहरू. यसबाहेक, एक मानक अर्थव्यवस्था ट्रेन टिकट इटाली मा यात्रा को लागी सस्तो र सबै भन्दा लचिलो तरीका हो.
Trenitalia मानक अर्थव्यवस्था ट्रेन टिकट सबै Trenitalia भाडा सस्तो छ. यस ट्रेनको टिकट अग्रिम बुक गर्नु उत्तम हुन्छ किनभने बेस टिकटहरू कम मूल्य – तिनीहरू छिटो बेच्छन्. यात्रुहरू जो एक मानक ट्रेन टिकट समात्छन् सूटकेसहरू लिन सक्छन् जुन सामानको सामानमा फिट हुन्छ, नि: शुल्कका लागि र प्रस्थान अघि उनीहरूको ट्रेन टिकट रद्द गर्न र आंशिक फिर्ती प्राप्त गर्न सक्दछ (का कटौती शुल्क 20%).
यो ट्रेन टिकट वर्ग मानक Trenitalia टिकट प्रकार भन्दा महँगो छ, को अर्थव्यवस्था Trenitalia प्रीमियम टिकट थप सेवाहरू प्रदान गर्दछ. यस प्रकारको रेल टिकट Trenitalia उच्च-गति रेलहरूमा उपलब्ध छ र प्रस्थान मिति भन्दा पहिले एक पटकको समय र मिति परिवर्तन अनुमति दिन्छ।.
मानक ट्रेन टिकटको फाइदाहरुको साथ, ट्रेनिटालिया इकोनॉमी प्रीमियम टिकटले राम्रो लेसनहरू प्रदान गर्दछ र लामो दूरीको यात्रामा सिटलाइन ठाउँहरू।. सबैभन्दा माथि, त्यहाँ तीन फूड मेनूहरू छन् जुन तपाइँले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र हल्का खाना र पेय पदार्थ तपाइँको सिटमा ट्रेनिटालिया रेलहरूमा दिइनेछ।.
व्यापार Treintalia टिकट:
को Trenitalia व्यापार टिकट खरीददारहरूले हामीले माथि लेखेका सबै सुविधाहरूको आनन्द लिन सक्दछन्, Trenitalia व्यवसाय प्रीमियर को यात्रु धेरै सामान झोला बाट लाभ, आरामदायक एर्गोनोमिक छाला सीट, विस्तारित लेगरूम, तीन खाद्य मेनूहरू छनौट गर्न. यसबाहेक, तपाईंसँग गोपनीयताका लागि पर्खालहरू छन् र Trenitalia ट्रेनहरूमा व्यवसाय निर्दिष्ट क्षेत्रहरूमा मौन क्षेत्र.
कार्यकारी Treintalia टिकट:
को Trenitalia कार्यकारी टिकट खरीददारहरूले आफ्नो टाउको बिरालो बनाउन र आरामदायी इटालीको दृश्यहरूको आनन्द लिनका लागि विस्तृत एर्गोनोमिकल भर्खरै छालाको सिट बाहेक माथि उल्लिखित सबै सुविधाहरूको आनन्द लिन सक्दछन्।.
त्यहाँ एक Trenitalia सदस्यता छtion?
इटाली को लागी एक पास छ, तर यो केवल एक सस्तो विकल्प को रूप मा सिफारिश गरीन्छ यदि तपाईं यात्रा को लागी ट्रेन गर्न को लागी 14 दिन, सदस्यता विशेष पासहरूको साथ ट्रेन द्वारा इटाली अन्वेषण गर्न अनुमति दिन्छ. छन्3उपलब्ध स्तरहरू: सजिलो, सुविधा, र कार्यकारी र तपाई बाट यात्रा को संख्या चयन गर्न सक्नुहुन्छ3गर्न 10 र ट्रेनको छनौट उच्च-स्पीड फ्रिक्से देखि इंटरसिटी र यूरोसिटी छनौट गर्नुहोस्.
पास कागज ढाँचामा उपलब्ध छ र भित्र सक्रिय हुनुपर्दछ 11 खरीदको दिनदेखि महिनाहरू.
Trenitalia को प्रस्थान पहिले आउन कसरी लामो?
तपाइँको Trenitalia ट्रेन प्राप्त गर्न र ठीक समयमा हुनुहोस्, रेलवे कम्तिमा पुग्न सिफारिस गर्दछ 30 तपाईंको ट्रेन प्रस्थान गर्नु अघि मिनेटहरू. वास्तवमा हामी सेभ ए ट्रेनमा छौं, विश्वास गर्नुहोस् कि यो पर्याप्त समय हो र तपाईं पनि पसलहरूको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ र ती आइटमहरू पाउनको लागि तपाईंलाई आवश्यक छ ट्रेन यात्रा सकेसम्म सजिलो हुन.
Trenitalia ट्रेन कार्यक्रम के हो??
यो गाह्रो प्रश्न हो तर एउटा कि ट्रेन बचाएर पूर्ण र वास्तविक समयमा जवाफ दिन सक्दछ. विस्तृतमा हाम्रो गृह पृष्ठमा जानुहोस्, इटालीमा तपाईंको मूल र गन्तव्य टाइप गर्नुहोस्, र तपाईं सबैभन्दा सही फेला पार्न सक्नुहुन्छ Trenitalia ट्रेन कार्यक्रम छन्. Trenitalia रेलहरू चाँडो रूपमा चल्दछ6छु 11 बेलुका मिलानबाट बोलोग्ना सम्म, प्रायः ट्रिनेतालिया ट्रेनहरू ढिलो साँझसम्म चल्दछन् र आधा घण्टा वा त्यो भन्दा बढीमा छुट्ने ट्रेनको साथ.
कुन स्टेशनहरू Trenitalia द्वारा सेवा गरीन्छ?
Trenitalia सबै इटाली कभर, तथापि, प्रमुख राष्ट्रिय स्टेशनहरु मिलान हो, रोम, भेनिस, नेपल्स, ओस्लो, बोलोग्ना, जेनेभा, फ्लोरेन्स, र भियना. छन् 11 अन्तर्राष्ट्रिय स्टेशनहरु:5ट्रिनेटलिया ट्रेन स्टेशन स्विट्जरल्याण्ड र मा6फ्रान्स मा स्टेशनहरु र केही अस्ट्रिया र जर्मनी र क्रोएशिया मा. स्पष्ट रूपमा तपाई आरामसँग र द्रुत रूपमा सुन्दर यूरोपेली यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै चीज हराएको बिना इटालियन दृश्यहरूको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ!
मिलान मा केन्द्रीय रेल स्टेशन व्यस्त मा स्थित छ Piazza Duca d'ओस्टा. रेल स्टेशन वास्तुकलाका साथ प्रभावशाली र गगनचुम्बी भवनहरूले घेरिएको छ. त्यसोभए तपाईं ट्रिनेतालिया ट्रेनमा चढ्न पर्खँदा तपाईं वरिपरि हिंड्न र अद्भुत शिल्पकलाहरूको प्रशंसा गर्न सक्नुहुनेछ.
रोम Termini युरोपमा सब भन्दा ठूलो ट्रेन स्टेशनहरू मध्ये एक हो. यो पुरानो रोममा डियोक्लेटियनको स्नान छेउमा अवस्थित छ. टर्मिनलमा प्रवेश पियाजा डेइ सिनकेसेन्टोबाट छ. छन् 29 टर्मिनल र Trenitalia को ट्रेन टिकट कार्यालय मा प्लेटफार्महरु स्टेशन को लबी मा छ.
फ्लोरेन्स ट्रेन स्टेशन, सन्त मारिया Novella, डुओमोबाट टाढा छ र फ्लोरेन्सको पुरानो शहरमा प्रमुख आकर्षणहरू. यस स्टेशनको नाम सान्ता मारिया नोभेला चर्चको पछाडि यसको प्रवेशद्वार पार गरिएको छ. त्यसैले, तपाईं सजीलो पुरानो शहर मा केहि अधिक सुन्दर पलहरु लाई चोरी गर्न सक्नुहुन्छ, मा जारी गर्नु अघि इटाली मा अर्को साहसिक.
नेपल्स टर्मिनल पुरानो शहर को पूर्व छ. यदि तपाइँ केहि बनाउने योजना गर्दै हुनुहुन्छ नेपल्सबाट दिन यात्रा पोम्पेई वा सोरन्टोमा, त्यसोभए तपाईं पक्कै आफ्नो रेल यात्राको लागि नेपल्स रेल स्टेशन मा रोक्नुहुनेछ.
यदि तपाई निश्चित हुनुहुन्न कि कुन शहर स्टेशन रोज्नु भयो त्यस शहरको बीचमा, हामीले हाम्रो साइटमा ठूला शहरहरूको बहुमत सबै स्टेशनहरू बनायौं, त्यसैले हाम्रो एल्गोरिथ्म तपाईं को लागी सही स्टेशन छान्ने छ र देखि पुग्नको लागि.
मसँगै ट्रेनिटालियामा के ल्याउने??
त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ आफैलाई ट्रिनेतालिया यात्रामा ल्याउनु आवश्यक छ. यसको शीर्षमा यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको फोनमा ट्रेनितालिया यात्रा कागजात छ वा छापिएको छ र मान्य पासपोर्ट हुनै पर्छ। यो यात्रा बीमा गर्न सधैं राम्रो हुन्छ.
कुन कम्पनी Trenitalia को स्वामित्वमा छ?
ट्रिनेतालिया इटालियन सरकारको स्वामित्वमा छ र एफएस इटालेली समूहको हिस्सा हो.
Trenitalia प्रायः सोधिने प्रश्न म कहाँ जान सक्छ Trenitalia साथ?
क्षेत्रीय, महानगरीय र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेनहरू, ट्रिनेटालिया ट्रेनहरूले तपाईंलाई कुनै पनि ठाउँमा इटाली र चयन गरिएका देशहरूमा लैजान सक्छ जुन इटालीसँग सीमा छ. उदाहरणका लागि, Trenitalia उच्च-गति रेल संग तपाईं फ्रान्स र स्विजरल्याण्ड को यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ.
Trenitalia को लागी बोर्डिंग प्रक्रियाहरु के हुन्?
ट्रेन टिकट बुकिंग र Trenitalia बोर्डि never कहिल्यै सजिलो भएको छैन. तपाईं सजिलैसँग आफ्नो Trenitalia टिकट अन्तिम मिनेटमा अनलाइन र मा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ 1 ट्रेनको प्रस्थान पहिले घण्टा. बोर्डिंग को लागी, तपाईलाई सबै चाहिन्छ एक राहदानी र PNR कोड प्रस्तुत गर्न (6-अंक कोड). स्पष्ट गर्न, PNR कोड तपाईलाई बुकिंग पुष्टिकरण ईमेलमा पठाइन्छ इ-टिकटको साथ. तपाईंले ट्रेन टिकट प्रिन्ट गर्न आवश्यक छैन किनकि यो तपाईंको मोबाइलमा उपलब्ध छ र कन्फर्मेसन ईमेलमा संलग्न छ, र ट्रेन कन्ट्रोलरले तपाईको टिकटलाई खराब नामको स्थितिमा नामबाट प्रमाणित गर्न सक्छ.
Trenitalia मा के सेवाहरू?
ट्रिनेटालिया ट्रेनहरूमा एक ट्रेनमा क्याफे-बार राखिएको छ जुन पेय र हल्का खानाको लागि समर्पित छ. मेनूमा स्यान्डविच सामेल छ, चकलेट चिप्स, नाश्ता, चकलेट बार, कफी, तातो चकलेट, र चिया र तपाईं यस रेस्टुराको रेल कारमा खान र पिउन सक्नुहुन्छ वा तपाईं आफैले सिटमा किनिएको फेरि लिन सक्नुहुन्छ. यदि तपाईं व्यापार मा यात्रा, प्रिमियम, वा प्रथम श्रेणी तपाईं एक विकल्प बाट एक नि: शुल्क स्वागत पेय छनौट गर्न सक्नुहुन्छ9उपलब्ध पेय र एक मीठो, दिलकश, वा ग्लुटन-मुक्त खाजा. सबै Trenitalia ट्रेनहरूमा, तपाईको सिटको छेउमा पावर स्लटहरू छन्.
सर्वाधिक अनुरोध गरिएको Trenitalia FAQ – के मैले Trenitalia मा अग्रिम सीट सिट बुक गर्नु पर्छ??
जब तपाईं एक Trenitalia टिकट आरक्षित, एक सीट स्वत: तपाईंलाई आबंटित गरिएको छ र आरक्षण गर्ने क्रममा तपाईं विशेष सीट आरक्षित गर्न सक्नुहुन्न. यदि तपाईं ट्रेन मा छ जब त्यहाँ स्वतन्त्र सीटहरु छन्, तपाईंलाई वरिपरि जान अनुमति छ, सिटहरू परिवर्तन गर्नुहोस्, र फरक ठाउँ छ.
Trenitalia भित्र WiFi इन्टरनेट छ??
जब तपाईं अग्रिम मा आफ्नो Trenitalia टिकट खरीद गर्नुहुन्छ, तपाईं रमाउन सक्नुहुन्छ नि: शुल्क वाइफाइ इन्टरनेट सबै Trenitalia frecciarossa प्रकार ट्रेन र कक्षामा.
निश्कर्षमा, यदि तपाईं यस टाढा पुग्नुभयो भने, तपाइँ Trenitalia ट्रेनहरु को बारे मा जान्नु पर्ने सबै कुरा जान्नुहुन्छ र मा तपाइँको Trenitalia रेल टिकट खरीद गर्न तयार हुनुहुन्छ SaveATrain.com.
के तपाइँ यस पृष्ठलाई तपाइँको साइटमा इम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ?? यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-trenitalia%2F%0A%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल), वा तपाइँ केवल यस पृष्ठमा सीधा लिंक गर्न सक्नुहुन्छ.